IVinicunca: izici, ukuqeqeshwa nokuheha izivakashi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngentaba enobuhle obuthile futhi osekube ngenye yezindawo ezinhle kakhulu nezintsha ePeru. Kumayelana nentaba I-Vinicunca. Kuyaziwa nangegama lentaba yemibala eyi-7 futhi itholakala ePeru. Kutholakala ngaphezu kwamakhilomitha ayi-100 ukusuka edolobheni laseCusco, inengqungquthela ephakeme ngamamitha ayi-5.200 ngaphezu kolwandle.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, i-geology nokwakheka kwentaba yaseVinicunca.
2 Isimo sezulu seVinicunca
3 Ukuhambela eVinicunca
Igama elithi Vinicunca livela ku-rainbow. Kuyinto yokwakheka kwezintaba okunamathiselwe ngemibala ehlukahlukene ngenxa yenhlanganisela eyinkimbinkimbi yamaminerali ahlukahlukene ayenzayo. Imithambeka nengqungquthela kunamabala ahlukahlukene aphelele esiwatholayo onsomi, ophuzi, oluhlaza okotshani, obomvu, opinki, nokunye ukuhlukahluka kwale mibala. Ingesinye sezivakashi ezibaluleke kakhulu kule ndawo yonke. Eminyakeni ethile edlule yayizungezwe iqhwa ngokuphelele ngakho wawungeke uyithokozele le ntaba. Kusukela ngo-2016, le ndawo ivakashelwe amakhulu ezivakashi futhi ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eCusco nasePeru.
Ngenxa yenani lemibala eliyihlanganisayo, yaziwa ngegama lentaba yemibala eyi-7 ehlonipha uthingo. Ngokusho kophenyo oluhlukahlukene, ama-hues anemibala eminingi kungenxa yenani elikhulu lamaminerali akhiwa ngalo. Wonke lawa amaminerali amboza indawo futhi ayizinto zemvelo ngokuphelele eyaqala ukwakheka cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-65 edlule. Lawa amaminerali akhiwa lapho amanzi nemvula zimboza cishe yonke imithambeka yayo nezintaba. Njengoba isikhathi sihambile, isimo sezulu esibi ngokwedlulele sale ndawo sincibilikise iqhwa futhi kulapho okwenzeke khona ukulindela yonke imibala le ntaba eyakhiwe ngayo.
Itholakala e-Andes yasePeru nase le ngqungquthela inokuphakama kwamamitha angu-5.200 ngaphezu kogu lolwandle. Le ndawo yonke ingeyedolobha lasePitumarca, abayibiza ngokuthi yiCerro Colorado. Ukuze ufike kule ntaba, kufanele udlule cishe amakhilomitha ayi-100 ukusuka edolobheni laseCusco. Ngemuva kwalokho kufanele uthathe uhambo lwamahora angaba ngu-2 eceleni komgwaqo omkhulu we-longitudinal wezindawo eziphakeme zaseningizimu yePeru, okuyiyona efinyelela ePitumarca. Uhambo luyaqhubeka ngomkhondo oya emphakathini wasePampa Chiri. Lolu hambo lwamakhilomitha ama-5 futhi lungenziwa ngezinyawo nangehhashi.
Isimo sezulu seVinicunca
Isimo sezulu sale ndawo sijwayelekile ezindaweni eziphakeme kakhulu. Ngakho-ke, isimo sezulu sibanda kakhulu. Ukugula kwemvula, komoya nokuphakama kungaba yizithiyo ezinkulu kubahambi abafuna ukuvakashela le ndawo enkulu. Amazinga okushisa angehla kalula ngaphansi kuka-0 ° C. Ngalesi sizathu, isikhathi esihle sokwenza le adventure yisikhathi esomile. Lesi sikhathi ngokuvamile sisuka ezinyangeni zika-Ephreli ziye ku-Okthoba. Ngalesi sikhathi mancane amathuba okuthi kube nemvula namazinga okushisa aphansi.
Uma uhlela ukwenza lokhu kuvakashela phakathi nesikhathi semvula esiningi, kungakuhle ukuthi ugqoke i-poncho esebenza ukukuvikela emvuleni. Lesi simo sezulu sisho ukuthi izimbali nezilwane kuzoba yindawo yezilwane ezijwayelekile ezivela ezindaweni eziphakeme kepha ezingakholeki neze. Phakathi kwezilwane ezivelele kukhona ama-llamas, ama-alpaca nama-vicuña. Izakhamizi zendawo yonke ziphethe ukukhulisa amahhashi awanikeza ukuthutha izivakashi. Esinye sezici ezisemqoka zezimbali ukuthi ziyikhaya lenani elikhulu lotshani bemvelo obaziwa ngegama le-ichu.
Uma ufuna ukuya eVinicunca ukujabulela le mibala yemvelo ngokuphelele kepha unesici somlingo, kufanele uthathe uhambo olunzima. Le ngqungquthela ebukekayo ibiwumgwaqo okhangayo weqhwa owaziwa nge-Ausangate. Eminyakeni edlule le ntaba ibilokhu ithandwa njengoba izinguzunga zeqhwa zincibilikile. Ungavakashela le ngqungquthela ngohambo njengesivakashi.
Kunezinsizakalo ezahlukahlukene ngokuya ngesimo nesikhathi ozoba yiso. Izinsizakalo zivame ukuba usuku olulodwa noma ezimbili. Iningi lalezi zinsizakalo livame ukuba nalo ezokuthutha, ukudla, amathikithi kanye nomhlahlandlela wobuchwepheshe ngubani ophethe ukuchaza ukuthi iVinicunca yaqala kanjani nokuthi yiziphi izici zayo. Edolobheni laseCusco kukhona nezinhlaka ezehlukene zezokuvakasha ezinikezela ngalezi zinsizakalo.
Ungazihambela wedwa, kepha kunzima kakhulu. Ukuze ukwazi ukuzihambela, kufanele uthathe ibhasi eliya eSicuani lisuka edolobheni laseCusco. Leli bhasi livame ukuthatha cishe amahora amabili nemizuzu engama-40. Uma usukhona, uthatha ibhasi eliya edolobheni laseQuesiuno. Uma usuqedile lolu hambo, kufanele uqale uhambo olude ukhuphuke uye entabeni yaseVinicunca. Intengo yethikithi lokungena ingamasoli ayi-10.
Uma uzohamba ngezinyawo, kumele ubazi ubunzima bentaba. Futhi ukuhamba cishe kungamahora ama-4 futhi, yize kungenangozi, kudinga umzamo omkhulu womzimba. Uma ungekho esimweni esihle somzimba futhi ukhona ujwayele ukwenza uhambo olude, uzoba nezinkinga ngokwenza uhambo. Kukhona ezinye izingxenye zemithambeka ebonakalayo ekukhuphukeni nasekukhuphukeni. Kodwa-ke, isimo sezulu esibi kakhulu kufanele sithathwe njengenye yezinkinga ezinkulu kakhulu ezidala inkinga enkulu yokuhamba izintaba. Isimo sezulu siyabanda kakhulu futhi nomoya ubanda kakhulu. Ukuphakama kwendawo kungadala ukugula kwe-altitude okwaziwa nangokuthi yi-soroche kubantu abahlukene. Ngalesi sizathu, kunconywa ukwamukelwa kwangaphambili kwezinsuku ezimbalwa edolobheni laseCusco.
Uma usuchithe izinsuku ezimbalwa zokujwayela edolobheni laseCusco, kufanele ugqoke izingubo ezifudumele ngokwanele ukuhamba. Uma ungumuntu ngubani akubhekwa njengokuma kahle komzimba kungcono ukuqasha ihhashi. Futhi awukwazi ukuhamba ngaphandle kwesigqoko, ingubo yokulala, i-sunscreen, amabhulukwe ashisayo, izicathulo ezilungele ukuhamba kanye ne-poncho yemvula. Siyakhumbula ukuthi lolu hambo alunzima kuphela ngokomzimba, kodwa sizoba nokukhubazeka kwesimo sezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeNtaba iVinicunca nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » I-Vinicunca